Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay isha ku heyso inay lasoo saxiixato xiddiga qadka dhexe ee kooxda PSG - Hoyga Wararka
Home Sports Newssuuqa kala iibsiga	Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay isha ku heyso inay lasoo saxiixato xiddiga qadka dhexe ee kooxda PSG
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay isha ku heyso inay lasoo saxiixato xiddiga qadka dhexe ee kooxda PSG Adrien Rabiot, kaasoo qandaraaskiisa uu dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Sida laga soo xigtay wargeyska Isbaanishka ee AS, Real Madrid ayaa qarka u saaran inay la soo wareegto ciyaaryahanka qadka dhexe ee reer France Adrien Rabiot ka dib markii uu qandaraaskiisa haatan ee Paris Saint-Germain uu dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedkaan.
Rabiot ayaa la joogay PSG tan iyo 2010kii, waxaana uu u saftay 227 kulan oo uu u saftay kooxda heysata horyaalka Faransiiska, tan iyo markii uu kulankiisii ugu horeysay u saftay 2012kii. 23 jirkaan ayaa dhaliyay 24 gool isagoo caawiyey 17 kale, waxa uu ku guuleystay shan horyaal 1 koobab, oo ay la socdaan maa muusid badan.
Si kastaba ha ahaatee, ciyaaryahanka khadka dhexe ayaan wali helin garoonka Thomas Tuchel tan iyo bishii December, ka dib markii uu ku guuldareystay inuu heshiis cusub u saxiixo kooxda. Rabiot ayaa sidoo kale ganaax ku maqnaa kooxda, waxaana uu wajahayaa falal anshax marin ah, ka dib markii lagu sawiray xaflado bashaal ah .
Tababaraha Zinedine Zidane ayaa la rumeysan yahay inuu ku faraxsan yahay awoodiisa tayada iyo farsamada Rabiot, waxaana uu doonayay inuu xagaagaan lasoo saxiixdo
WAX YAABO BADAN KA OGOW BARCELONA VS ESPANYOL KA HOR KULANKA CATALAN DERBY
Daawo: Xamar Waa La Wada Lee Yahey Inta Kalana Qabiilo Gooni ah Ayaa Leh Sidaa Waxa Yiri
Lionel Messi ayaa doonaya xiddigaha ugu fiican Premier...
Chelsea ayaa sheegtey inay la soo wareegayan weeraryahanka...
Gunners ayaa hogaamineysa tartanka loogu jiro xiddiga kooxda...
Barcelona vs Juventus Waxa dhexmari doona tartan xiiso...
Real ayaa diyaar u ah iney 270 milyan...
Tababaraha kooxda Barcelona Ernesto Valverde ayaa ka warbixinaya...
Arsenal Ma u dhaqaaqi doontaa iney la soo...
Eden Hazard Numberke Ayuu u Xidhan Doonaa Real...